ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိစက်ယန္တရားမြို့၏နာမည်ကောင်းရှိသောရှေးခေတ် Zhengzhou မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသောဆန်စက်ကဲ့သို့လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။,စပါး huller စက်,ဆန် destoner,ဆန်တနျး,ဆန်စက်စက်ရုံ ,ဆန်စည်
, ဆယ်နှစ်ခန့်ကြာ. ဘယ်ကျယ်ပြန့်သေးငယ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုကြသည်,အလယ်အလတ်နှင့်ရှားပါးလယ်ယာမြေယာဂရိတ်ဝန်ဆောင်မှု, အရည်အသွေးမြင့်မားသော, ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ, နှင့်အချိန်မီပေးပို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါတယ်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တန်းတူညီမျှမှု၊.
လယ်ယာကဏ္ in တွင်သင်၏ရွှေပေးသွင်းသူနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် . ခေတ်မီသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ, နှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးခဲအချိန်တွင်သာလွန်သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းရန်သေချာပါသည်. ဤသည်များစွာသောတပ်မက်လိုချင်သောအစီးပွားရေးတန်ဖိုးများကိုအောက်ပါ; ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များထံမှရရှိသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုကုန်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်အချိန်ပေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်. ဒါပေါ့, ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းတိုင်း၏အဓိကတာ ၀ န်ဖြစ်သည်.